Boss Express ၏အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များအား Easybook တွင်ယခုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ
မကြာခင်မြန်မာပြည်ကိုခရီးသွားတော့မလား? သတင်းကောင်းရှိပါတယ်! Easybook မှ Boss Express ၏အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များကိုဝယ်ယူပြီး မြို့တော် ရန်ကုန်မှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတောင်ကြီးမြို့သို့သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါ။
Boss Express ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြန်မာပြည်၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ် ဒါ့အပြင်သေချာစွာလေ့ကျင့်ပေးထားသောကားဆရာများမှလည်း ခရီးသည်များလုံခြုံစိတ်အေးချမ်းသာစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှစေ့စပ်သေချာစွာဝန်ဆောင်မှုများေပးလျှက်ရှိပါတယ်။ Boss Express ၏ ခရီးသည် ၂၇ ယောက်စီးကားကြီးများကလည်း ခရီးသွားများနေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဖြင့်သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်ရန်အတွက်နေ့စဉ်ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သင့်၏ရန်ကုန်မှတောင်ကြီးသို့ခရီးစဉ်အတွက် Boss Express ၏အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များကို Easybook မှယခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါ!